Ogaden News Agency (ONA) – Dil Qorshaysan oo cadowga Itoobiya ka Dhex Fuliyay Xerada Qaxootiga ee IFO
Dil Qorshaysan oo cadowga Itoobiya ka Dhex Fuliyay Xerada Qaxootiga ee IFO
Posted by ONA Admin	/ March 10, 2015
Muwaadin ka mid ah qaxootiga S.Ogadenya eek u jira Xerada Ifo ayaa habeennimadii xalay laga helay maydikiisa xerada Ifo ee deegaanka Dhadhaab ee Gobolka W/B Kenya.
Muwaadinkan u dhashay wadanka Ogadenya oo lagu magacaabo Xassan Mukhtaar Digaale ayay rag hubaysan fiidnimadii xalay ku dileen qaybta Xaawo Jubeey ee xerada Ifo waxaana goobta ka baxsaday dablaydii ninkan dishay.
Ninkan oo kasoo jeeda dagmada Goday ee xarunta Gobolka Shabeelle ayaa bilo yar uun joogay xerada isagoo kasoo cararay dhibka uu gumaysiga Itobiya ku hayoshacabka rayidka ah. Lama garanayo sababta ka dambeeysay dilka muwaadinkan oo ah nin ku cusubaa xeryaha Qoxootiga iyo Guud ahaan wadan ka Kenya balse ma aha wax aad loola sii yaabo falalka guracan ee gumaysigu uu kaga daba imanayo shacabka kasoo cararay dhibkiisa.
Ma aha markii ugu horaysay ee muwaadiniin udhalatay wadanka Ogadenia lagu laayo xeryaha qoxootiga waxaana dadka qoxootiga ah ee cararka ku yimid xeryaha kaga daba imaan jiray oo layn jiray gacan-ku-dhiigalayaal ay soo diraan sirdoonka xukuumada gumaysiga Itoobiya oo qaarkood lagu hayo xabsiyada Kenya.